Isithakazelo Ngobusuku obubodwa, ukudluliselwa, noma Shintsha Ukukala - Kuhle Forex EA sika | Expert Advisors | FX Robots
IkhayaForex SchoolIsithakazelo Ebusuku, ukudluliselwa, nofana Shintsha Rate
Lapho sengineminyaka engaba ngu 5 pm EST (isikhathi kuyahlukahluka nabanye wabathengi) uma uphethe isikhundla evulekile akhawunti yakho noma uyasho, noma adonswe, ukukhokhiswa isithakazelo ngesayizi egcwele izimo zakho ezivuliwe, kuye wekhasi yakho osungulwe futhi isikhundla emakethe . Kuye senzalo umehluko, ungase ukhokhele noma izimali isithakazelo, eyaziwa nangokuthi ukudluliselwa izimali.
Lokhu inani lenzalo libizwa phenduka, Ngoba kwenzeka lapho umuntu isikhundla evulekile komunye ledethi (idethi yokukhokha) is yagingqika ku olandelayo ledethi. Ukudluliselwa ukuthenga kwenziwe ngokuzenzakalelayo yakho broker uma ubambe isikhundla evulekile esidlule ushintsho ledethi. Ngale ngasese, le ndawo kwenzeka ezinsukwini ezimbili zebhizinisi. Ngakho, uma kuyintando ngoMsombuluko ngaphambi 5PM zezimali bayadayisa value ngoLwesithathu, ngemuva 5PM ngoMsombuluko usuku ukuhweba iba ngoLwesibili futhi zona ukubaluleka ngoLwesine.
Ukudluliselwa osebenza ku Tikhundla Vula esidlule 5 PM EST
Ama-roller asetshenziselwa ezikhundleni ezivulekile ngemuva kokushintshwa kwe-5 pm EST ngosuku lwe-value, noma idethi yokukhokha. AZISETYENZELWA uma ungaphathi isikhundla sakho ngaphezu koshintsho osukwini lwenani; Ngakho-ke, uma uvula futhi uvala ukuhweba kwakho ngaphambi kuka-5 pm awusoze wangena ekukhokhisweni noma ebolekweni.
ULwesithathu athwala ukudluliselwa 3 wosuku
On 5PM EST ngoLwesithathu izinguquko ledethi ngoLwesihlanu kuze kuyoshaya uMsombuluko, a ukudluliselwa ngempelasonto, okusho ukuthi ukudluliselwa ezintathu ngosuku (uMgqibelo, iSonto, ngoMsombuluko), okusho ukuthi izindleko ukudluliselwa / uzuza abazobe kathathu njenganoma yisiphi ngelinye ilanga.
Kungani Lokhu Isithakazelo Credit Noma Kwemali Wenzeka?
Ngoba uma bayadayisa zezimali, wena bayadayisa imali. Uma uya eside lwemali, kuba sengathi uphethe idiphozi ebhange, futhi kulindelwe ukuze uthole inzalo imali yakho, futhi uma uya letimfisha lwemali, kuba sengathi kwemali, futhi ungase ulindele akhokhe inzalo ku loan. Wafana kuba more xaka ngoba nge pair lwemali, lezi enikhuluma olulodwa lwemali nge nebhalansi eyeqile (lwemali wena eside) futhi omunye nge imali esele (lwemali wena iDemo), futhi umehluko phakathi zenzalo we amazwe amabili ubizwa ngokuthi entshisakalweni izinga umehluko.
Kungakhathaliseki ukuthi uyasho noma adonswe kuxhomeke ezicini ezimbili: 1) noma ngabe uphethe isikhundla eside noma esifushane; futhi 2) le senzalo umehluko phakathi kwemali ezimbili ku pair wena bayadayisa.
Njengoba zonke ukuhweba lwemali kuhilela kwemali eyodwa ukuthenga esinye, isithakazelo ukudluliselwa amacala bayingxenye Forex zokuhweba. Inzalo esikhokhelwayo lwemali ukuthi kubolekwe, futhi wathola ku lowo wathenga. Empeleni, uhola noma ukhokhe inzalo kuye isiqondiso isikhundla sakho. Uma ukuthenga lwemali ukhokhe inzalo enkulu kunaleyo wena Ukuboleka, umehluko net uzokhombisa ukuthi unalo igciwane (ie AUD / USD) - futhi uzozuza izimali (zifakwe) ngenxa yalokho. Uma uthengisa lwemali nge ukhokhe inzalo enkulu kunaleyo wena Ukuboleka, umehluko net izokhombisa ukuthi akanalo igciwane, futhi uzogcina ukukhokha (kungenziwa ezidonswe) leyo ukudluliselwa. I rollover izindleko / credits zisekelwe usayizi wesithombe sakho isikhundla, ne emikhulu isikhundla, elikhulu izindleko noma inzuzo kuwe.
Kanjani Omunye Find Out The Isithakazelo Amanani Of Amazwe Engalungile Ngalesi Sithombe?
Kukhona izindawo eziningi ukubheka kuwebhu:
Ngokwesibonelo, www.worldinterestrates.info kuveza zenzalo ngendlela lula ukufunda ithebula njengalena ngezansi (olunembile Mashi 2013):
Kusukela ishadi ngenhla, bangahlangana ukuthi izinga Australia 3.00% kakhulu njengengcebo enkulu kunemicebo ukwenzela ukungena okuncane kakhulu 0.25% we I-united states. Zimali, lokhu bekungase kusho ukuthi omunye ubenganginathisa uthole isithakazelo ngaphezulu kokuba ase-Australia eside nokuba iDemo aseMelika (ie, AUD eside / USD). Eqinisweni, ngalesi sikhathi, umuntu ayengathola khona imali eningi nokuba Aussie eside ngokumelene nanoma yimuphi omunye lwemali ezinkulu (ngaphandle kwe China futhi India), njengoba benjalo bonke ephansi kakhulu isithakazelo kuka nedola laseMelika.
How Do You Bala I rollover Ukukala Of A elithile lwemali Pair (in General)?
Khumbula ukuthi ukudluliselwa ukuthenga kwenziwe ngokuzenzakalelayo forex yakho broker uma ukubamba isikhundla esidlule ushintsho ledethi.
Nokho, ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, ungase ukwazi ukubala ekusithekeni.
Nangu ifomula ukudluliselwa ukubala:
Inkontileka ukubaluleka esinikelweko x (isizinda lwemali senzalo - quote lwemali lenzalo) / izinsuku 365 ngonyaka x zamanje base lwemali izinga = ukudluliselwa nsuku isithakazelo lasebhange / credit
Isibonelo ukudluliselwa Kubalwa USD:
Uthenga 1 okuningi AUD / USD kuyilapho AUD / USD Inani ukudluliselwa isikhathi 1.0486. kufanele ukhokhe malini eguqulayo / ukuthola at 5 PM EST AUD / USD ngentengo 5:? 00 PM EST: 1.0486
Australia uBorrow Ukukala = 4.75% ngonyaka
US Unikeza Ubufakazi Ukukala = 0.25% annumTherefore ngayinye: $ 100,000 * (4.75% - 0.25%) / 365 * 1.0486
Eminye: $ 100,000 * 4.50% / 382.74 = 11.75 dayThat ngayinye kwaba nje isibonelo kanye eguqulayo Ungashintsha nsukuzonke.
Qaphela: Sisebenzisa i-365 ngoba inani lesithakazelo esibonisiwe likhokhwa nsuku zonke. Njengoba umthengisi wethu egcina isikhundla sakhe sivulekile usuku olulodwa, kufanele sihlukanise nge-365.
Uma ufuna wokubala cool ukukusiza ukubala ezingaba ukudluliselwa emihle noma emibi wamanje ungase ukhokhiswe uma ungaqhubeka wenza sesimweni phezu izinsuku eziningana, ungasebenzisa Oanda isithakazelo wokubala.
I isifinyezo sale wokubala ngezansi:
Wena njalo ufuna ukhombise amahora labetibambile ukuthi ube mkhulu 24 wakuqonda ukubala ukudluliselwa.
Qaphela: lesi sibalo sikunikeza umbono omuhle wesilinganiso samanje se-rollover sombala wemali omude noma omfishane, kepha ikakhulukazi emananini akwa-Oanda uqobo. Ukwazi isilinganiso samanje se -ollohogethi yakho ethile, ungasebenzisa amathuluzi angezansi.
Indlela esheshayo yokubona Isithakazelo Overnight Of Noma yimuphi Pair Of Noma yimuphi Broker
Uma ufuna ukwazi isilinganiso se-rollover yohlobo lwakho lwemali olulodwa, amanye amapulatifomu e-forex afana nokuhweba kwe-FXCM ashicilela lezi zilinganiso ezithile. Noma kunjalo, uma usebenza ne MT4 platform, ungafaka isicelo okulandelayo ezimbili MT4 Imininingwane izinkomba ishadi lakho:
StatMonitor_1.1Phat-.mq4 Ekhombisa Ukusabalala, Ukuthenga / Thengisa Shintshanisa, Ivolumu uphawu ishadi
A isithombe kokubili lezi yizinkomba Ukugunda lisetshenzisiwe AUDUSD ishadi FXPro libukeka kanje:
Isibonisi sokuqala, iStatsMonitor_1.1Phat.mq4, sibonisa ukusakazeka kwe-20 (okuyi-2.0 pips ngoba ngumthengisi wezinombolo ze-5), ukushintshaniswa kokuthengwa kwe-14.83 nokushintshaniswa kwe-17.06. Ngakho-ke kunoma yiliphi ilanga elijwayelekile le-rollover, ngaphandle kweLwesithathu, uzothola isikweletu se-$ 14.83 ngokuba yisikhundla esiphezulu se-100,000 se-AUD / USD uma ubambe isikhathi esidlule, futhi uzothola ukunqunywa kwe-$ 17.06 ngokuba mfushane Isikhundla esiphakeme se-100,000 se-AUD / USD. Isibonisi sesibili, Bonisa Ukwaziswa Konke Ama-Pairs. i-ex4, ibonisa intengo yebhizinisi, ibanga lesilinganiso nsuku zonke, ukusabalalisa, inani lephayiphi kanye nokuthenga / ukuthengisa ukushintshwa kolwazi ngobuningi bezimbili, kusindise isikhathi esiningi uzama ukuthola lolu lwazi ucezu ngalunye, umbhangqwana ngokubili. Nge-shazi ungabona masinyane ukuthi i-AUD / USD inenani eliphakeme kakhulu lokushintshaniswa kunabanye, okungaba ulwazi oluwusizo kunoma ubani ocabanga ngalokho okulandelayo okumele kwenziwe ngokuhweba.
Kungani I Negative Shintshanisa Amanani eliphakeme kakhulu Positive Shintsha Amanani?
Ezweni elikahle le emihle nemibi eguqulayo izinga kufanele kube izinga alinganayo (okungukuthi, emfanekisweni ngenhla, kokubili eguqulayo ezinhle nezimbi AUD / USD kufanele kube 14.83), kodwa kunalokho, okungekuhle eguqulayo izinga ngokuvamile kubonakala okukhulu ngaphandle omuhle eguqulayo izinga. Leli kungenzeka akulona fair kodwa indlela umdlalo Brokerage isethiwe. Uma umlando wakho ukuhweba kwakufanele ukwethula nenani elilinganako ufisa futhi kufanale agqoke izikhindi kwenziwe ngaphezu 1 ngosuku, cishe i-swap jikelele negative icala ku Imininingwane ayo yonke imidanti yohwebo yakho. Kungase uphumele okuningi kodwa into kufanele bagcine kahle njengoba izindleko zokuhweba.
Ungase futhi bethola ukuthi abanye wabathengi kuzodlondlobalisa engeyinhle eguqulayo izinga ngokuba noma eside noma esifushane pair lwemali. Uma ubona broker Ngokwenza lokhu, ungase ufune ukuba aphinde acabange kokuba i-akhawunti naye.
Ungayibona Kanjani Gwema Ukukhokha Shintsha Amanani?
Kunezindlela okungenani ezintathu ungakwazi sigweme ukukhokha eguqulayo amazinga.
1. Trade e Direction of Positive Isithakazelo.
Ungaya ukuhweba kuphela isiqondiso lwemali enikeza eguqulayo omuhle. Lokhu ngokuvamile abanconywa ngaphandle ukuhweba kulolo hlangothi esikhethekile kuye kwaba indlela elihle kunawo ngokuya emuva ihlolwe futhi phambili ukuhlolwa ukuhweba imiphumela.
2. Trade kuphela Intraday futhi Tikhundla Eduze 5: 00 PM.
Ubungeke ugweme eguqulayo ngoba wena nangaphakathi phambi ukudluliselwa isikhathi. Nokho, akufanele juqula phathelana i Intraday abadayisi ngenxa eguqulayo. Isizathu kuphela elingakwazi ube i Intraday abadayisi kufanele kube yakho isu kanye nemiphumela yakho ukusebenza ancike kokuba Intraday. Hhayi ngenxa eguqulayo.
3. Vula Shintshanisa Khulula YamaSulumani akhawunti, Kunikezelwe ngu Ezinye Brokers.
Lena inketho okunikwa amakhasimende Muslim, nakuba empeleni non-amaSulumane njalo akhethe isigaba nekayinikela. Lawa ma-akhawunti ethile ziphathwa nekuhambisana izinkolelo Islamic futhi inqubomgomo abanandaba ukuthi ikhokhwe phezu izenzo zebhizinisi. Uma ukholwa ukuthi uzobe kokuba ukuthengiselana eziningi ngobusuku obubodwa, ungase ucabangele kokuvula eguqulayo khulula akhawunti Islamic. Ngokwami, ngicabanga lena ukhetho best of the ezintathu, futhi lapho ngibona ukuthi broker inikeza le ndlela, ngahlanganyela ngokuzimisela ukuthathe.
Australia uBorrow Ukukala
Ungakugwema kanjani ukukhokha eguqulayo amazinga
Wenzenjani ukubala izinga ukudluliselwa othile lwemali pair
Umuntu ukuthola kanjani ukuthi amazinga enzalo yamazwe ahlukene
Ngobusuku obubodwa Isithakazelo rollover noma Shintsha Ukukala
Indlela Quick Bheka Isithakazelo Overnight ka Noma yimuphi Pair ka Noma yimuphi Broker
Kungani lokhu credit isithakazelo noma lasebhange zenzeka